Radio Don Bosco - Masindahy Simon Stock
Masindahy Simon Stock
Naseho ny : 17 jolay 2020
17 jolay — Ny Simon Stock resahana amin’ity volana jolay ity dia iray tamin’ireo anglisy voalohany niditra tao amin’ny fikambanana karma. Teraka ny taona 1165 tao amin’ny faritr’i Kent izy. Rehefa nitoka-monina irery izy dia niditra tao amin’ny fitokana-monina karma. Izay nandraisany andraikitra goavana tamin’ny taona 1224.
Tamin’io fotoana io moa no nandaozan’ny fikambanana ny tany masina nandositra ny Sarazin ka nifindra nankany Eorôpa. Voafidy ho prieur général, izany hoe lehiben’ny fikambanana eran-tany izy, ka nampiandreketan’ny Fiketrahana Masina mba hanova ny fitsipi-piainan’ireo mpitoka-monina tao Mont-Carmel ho toy ny an’ny dominikanina sy ny fransiskanina. Na dia teo aza ny maha contemplatif, izany hoe mpivavaka, mpibanjina, azy ireo dia nandray anjara tamin’ny asa pastôraly sy ny fitorian-teny ary ny fampianarana izy ka tany amin’ny Université no nitoriany. Ankoatra ireo dia izy ihany koa no nanome ny fomba fanajana an’i Masina Maria izay nifantoka tamin’ny scapulaire. Maty tao Bordeaux ny 16 mey 1265 i Simon Stock.